Subsurface: အသုံးဝင်သောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ရေငုပ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ် Linux မှ
အခမဲ့အတွက်အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းပြီးအခမဲ့လျှောက်လွှာများကိုဆက်လက် အားကစားareaရိယာဒီနေ့လူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ့်အရာတစ်ခုကိုစူးစမ်းလေ့လာသွားမှာပါ ရေငုပ်ကမ္ဘာ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားနာမည်က "မြေအောက်".
"မြေအောက်" တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Multiplatform သတင်းအချက်အလက်မန်နေဂျာ အဘယ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဖြစ်ပါသည် ရေငုပ် ကျင်းပရန်။
MyTourBook: အားကစားလေ့ကျင့်ရေးမန်နေဂျာ၏ဗားရှင်း ၂၁.၆.၁
ပြီးတော့အနည်းငယ်ရှိပါတယ်ကတည်းက အခမဲ့, ပွင့်လင်းအခမဲ့ application များ ကြောင်းသူ့အဘို့ရရှိသောနိုင်ပါသည် အားကစားareaရိယာကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေထားသော link သို့ချက်ချင်းထားသွားမည် "MyTourBook":
"MyTourBook သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြစ်ပြီး GPS စက်၊ စက်ဘီး၊ ergometer နှင့်အခြားကွန်ပျူတာအားကစားပစ္စည်းများမှမှတ်တမ်းတင်ထားသောလမ်းကြောင်းများကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အခမဲ့၊ ပွင့်လင်း။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Eclipse (Java) ကို အခြေခံ၍ စပိန်ဘာသာအပါအ ၀ င်ဘာသာစကားများစွာနှင့်ဘာသာစကားမျိုးစုံအထောက်အပံ့ကိုရရှိထားပြီး multilatform (Linux, Windows နှင့် MacOS) ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏စွမ်းရည်များကိုဆက်လက်ချဲ့ထွင်ခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်တွင်များစွာလုပ်နိုင်သည်။" MyTourBook: အားကစားလေ့ကျင့်ရေးမန်နေဂျာ၏ဗားရှင်း ၂၁.၆.၁
1.1 Subsurface ဆိုတာဘာလဲ။
"Subsurface သည် Windows, Mac နှင့် Linux များတွင်အလုပ်လုပ်သော open source ငုပ်ခြင်းပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပန်းဖြေခြင်း၊"
ပြီးတော့က စိတ်ဝင်စားစရာအချက် ဒီအစီအစဉ်အကြောင်းတစ်ခုထက်ပိုသောဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဆယ်စုနှစ် (၂၀၁၁) အားဖြင့် Linux Torvalds:
"Subsurface သည် Linux Torvalds နှင့် developer များအဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Linux, Windows နှင့် MacOS များအတွက်ရရှိပြီဖြစ်ပြီးများစွာသော dive ကွန်ပျူတာများနှင့် divelog ဆော့ဝဲလ်များမှဒေတာများကိုတင်သွင်းခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ခေတ်သစ်ငုပ်ကွန်ပျူတာများမှပေးသောသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအဆင့်မြင့်ဖော်ပြသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသည်။ အသုံးပြုသူသည်၎င်းတို့၏ရေငုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၂၀၁၂ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင် Dirk Hohndel သည် Subsurface ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။"
၎င်းသည်သင့်အားရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းနှင့်အတူ၊ လေ၊ Nitrox သို့မဟုတ် Trimix များဖြင့်ရေငုပ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်စီစဉ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် GPS ကိုသြဒီနိတ်များ (မြေပုံဖြင့်လည်းထည့်သွင်းနိုင်သည်) အပါအဝင်ငုပ်သည့်အချက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်၊ အသုံးပြုသောစက်ကိရိယာများနှင့်အခြားသူကိုငုပ်ရာတွင်မှတ်သားနိုင်ပြီးအသုံးပြုသူသည်ငုပ်ခြင်းကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်နှင့်မှတ်စုများထပ်မံသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ရေငုပ်တစ်ခုစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောတံဆိပ်များကို ပေး၍ သတ်မှတ်ထားသောကွဲပြားသည့်စံနှုန်းများ (တံဆိပ်၊ နေရာများ၊ အဖော်များ) အပေါ် အခြေခံ၍ သူတို့၏ရေငုပ်များကိုစစ်ထုတ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားရေငုပ်များကိုခရီးများသို့အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ရေငုပ်ခြင်းများကိုတစ်ချိန်တည်းတည်းဖြတ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်၊ ထို့ကြောင့်စာရင်းရှည်များကိုထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူစေသည်။
အမျိုးမျိုးသောငုပ်ကွန်ပျူတာများကိုထောက်ပံ့သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် MacDive, Suunto DM3, DM4 နှင့် DM5, JDiveLog နှင့် divelogs.de အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောပြင်ပရင်းမြစ်များမှ divelogs (ရေအောက်ငုပ်ရေငုပ်၏မှတ်တမ်းများ) ကိုတင်သွင်းနိုင်သည်။
ယင်း၏အတွက် တရားဝင် download အပိုင်း, အပေါ်မှာတပ်ဆင်ဘို့ရှိ၏ GNU / Linux များ ကွဲပြားခြားနားသော ဖောင့်၊ installer ဖိုင်များဥပမာ - PPA, Snap, OBS နှင့် AppImage repository။ ၎င်း၏ source code ကို Git သို့မဟုတ် compressed file (.tgz) မှတဆင့်လည်းရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုအမှု၌, ငါတို့သည်သင်တို့၏လက်ရှိအသုံးပြုပါလိမ့်မယ် အရင်းအမြစ်ဖိုင် အတွက် GNU / Linux (Subsurface-5.0.2-x86_64.AppImage) ပုံမှန်အတိုင်းအကြောင်းကို Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux အပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10)နှင့်ငါတို့အောက်ပါ built ခဲ့သည် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်».
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကွပ်မျက်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ ဂရပ်ဖစ်အင်တာဖေ့စ် (သို့) terminal မှ၎င်းသည်ပြproblemsနာမရှိဘဲစတင်ပြီးရိုးရှင်းပြီးသန့်ရှင်းသော interface ကိုပြသသည် ရွေးချယ်စရာအများအပြားနှင့်ပြည့်ဝသောမီနူး လှုပ်ရှားမှုနှင့်ယင်း၏အသုံးပြုသူများ၏မျက်နှာသာအတွက်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်။
ထိုကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်၏ထံမှရယူနိုင်ပါသည် စာရွက်စာတမ်းများကို web အပိုင်း နှင့်၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် GitHub.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ခေါ် application ကိုအကြောင်းကို «Subsurface»အရာ, တစ် ဦး စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ် Multiplatform သတင်းအချက်အလက်မန်နေဂျာရေငုပ်အားကစားforရိယာအတွက်အခမဲ့၊ ပွင့်လင်း။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Subsurface: အသုံးဝင်သော open source dive logging program